Torso Mmekọahụ Mmekọahụ Lightweight Mini Hips & Legs for Sale
TPE & Silicone Mmekọahụ Mmekọahụ Ebufe Na-ebugharị Mfe Dị Ọcha
Ọ bụrụ na ịnweghị ohere nchekwa zuru oke ma ọ bụ na - akpali ụmụ bebi ugboro ugboro, ụkwụ anyị na mmekọahụ nwa bebi toso ihe egwuregwu ụmụaka nwere kọmpat, na ịzụrụ ụmụ bebi mmekọahụ nwere ike inye gị azịza zuru oke. Ha dịkwa mma maka ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị nwere mmasị dị iche iche, bụ ndị nwere naanị akụkụ ụfọdụ nke ahụ ịhụnanya nwa bebi. Họrọ otu n'ime ụmụ bebi nke kacha mma kwesịrị ekwesị, ọ dị ka ụmụ nwoke ma ọ bụ nwanyị n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ akụkụ niile.
Mmekọahụ Mmekọahụ nke Di na Nwunye Na-ebelata Mmetụta
A na-akpọkwa ụmụ bebi nwoke na nwanyị mmekọahụ abụọ ụmụ bebi ịhụnanya. Ha bụ ihe eji egwuri egwu nwoke na nwoke nke e mere iji nye obi ụtọ na mkpakọrịta. Lsmụ bebi ahụ bụ ọnụ dị ọnụ ala, dịkwa mfe ịchekwa, ma fechaa mgbe ha na-agagharị ma na-egwu egwu. Nwanyi na oke nwoke di. A sị ka e kwuwe, ọ bụrụ na ị nwere mmasị naanị n'ụkwụ ya, gịnị kpatara ị ga-eji zụta nwa bebi zuru ezu?
Site na akụkụ ahụ ruo na nipples na akụkụ ahụ nwoke na-ahụ n'anya, na-etinye ihe mkpofu ziri ezi n'ebe kwesịrị ekwesị, ha na-eju anya nke ukwuu. Shapedị ha na ọdịdị ha dị ka ezigbo nwanyị. Tụkwasị na nke ahụ, nha ha mere ka ụmụ nwoke ndị nwoke ji egwuri egwu dị mfe ọcha, ma ọ bụ n’ebe a na-asa na mmiri, n’ebe a na-asa ahụ, ma ọ bụ n’ebe ọzọ.
Ha nwere otu ụdị mmekọahụ na ụdị ahụ dị ka ụmụ bebi na-enwe mmekọahụ zuru oke na obere nkwakọ ngwaahịa. Lsmụ bebi ndị a zuru oke ma ha enweghị akụkụ ụfọdụ nke ahụ mmadụ. Ha nwere ọrụ niile nke ndị na - akpụcha bebi anyị zuru oke, ma nwee ọkpụkpụ dị n'ime, anụ TPE dị nro na na-agbanwe agbanwe, na nhọrọ ndị ọzọ!
Maka ụmụ nwoke chọrọ iji meziwanye ahụmịhe ha na mmefu ego zuru oke, ahụ anyị bụ ahụmịhe nwa bebi kachasị mma. Ọ bụrụ n'ịchọrọ igwu egwu na ụmụ bebi na achọghị ịchọrọ nsogbu na akụkụ aka gị niile, mgbe ahụ Torsodolls anyị dị ịtụnanya bụ azịza zuru oke!
Nha ya mere ka ụmụ bebi mmekọahụ a dị ọcha. Ma ị na-eme nke a na igwe nri, ịsa ahụ, ma ọ bụ ebe ọzọ. O nwere ike inyere gị aka inweta ihe ọmụma zuru oke nke ihe egwuregwu ụmụaka na-enweghị ịchekwa na iburu ha. Tụkwasị na nke a, ọkara nke ogologo a nke a na-eme ka ọ dị mma maka nchekwa nkeonwe ma dị mfe ibu.